Demographics nke Online Grocery Shopper | Martech Zone
Di na nwunye ole na ole gara aga, m nwalere Pịa ndepụta, Rozụ ahịa ihe n'ịntanetị nke Kroger. Usoro ahụ enweghị ntụpọ, yana ọtụtụ uru karịa ịzụ ahịa ahịa. Nke mbụ, enwere m ike ilele mmefu ego m mgbe m na-etinye ihe ọ bụla n'ime ụgbọ m. Enwere m ike ịhụ ihe ọ bụla erere. Usoro ahụ na-achọpụta ngwaahịa m kachasị m zụrụ. O were m nkeji 10 iji gbagote, mee ka ndị otu Kroger buru ụgbọ ala m, ma lelee.
Ọ bụrụ na m nwere otu mkpesa mara mma ọ bụ na ndị otu gbanwere Claussen pickles maka Vlasic. Ihe m chere bụ na onye na-ebu ihe oriri m na-ele anya na ngalaba ndị na-atụtụ mmanụ kama n'akụkụ nke ụlọ ahịa ahụ dị na friji. Oh ndi mmadu!
Nke ahụ bụ obere ọnụahịa ịkwụ ụgwọ, agbanyeghị! Ọ bụghị ihe ijuanya na eGrocery ga-akụ okpukpu abuo na 2016:
40% nke 2015 ndị ​​na-ere ahịa n'ịntanetị kwuru na onye na-ere nri ha anaghị enye eCom, na-egosi ire ere na ohere iguzosi ike n'ihe maka ndị isi ụlọ ahịa ahụ.
64% nke ndị nwara ịzụ ahịa ịntanetị ga-agbanwe ndị na-ere ahịa maka nnukwu ahụmịhe dijitalụ
GenX, ụmụ nwoke na ndị nwere ụmụaka bụ ngalaba na-eto ngwa ngwa maka eGrocery afọ a
The 2016 Online ụlọ ahịa Shopper infographic na-akọrọ data site na akụkọ na-adịbeghị anya site na Unata. Nkwupụta ahụ na-ekpughe ọnọdụ dị na eCommerce maka 2016 gụnyere: ụmụ nwoke nwere mmasị na eGrocery, GenX bụ ngalaba na-eto ngwa ngwa maka eGrocery na ndị na-azụ ahịa nwere ụmụaka bụ ndị mbụ maka ntanetị. Abụ m onye egwuregwu zuru oke maka igwe mmadụ!
Tags: pịa ndepụtaigwe mmaduecommercearụ ọrụnri ụlọ ahịanri nri ụlọ ahịa omume igwe mmadụahịa ịzụ ahịaEbeendepụta krogerahịa krogerngwa nri n'ịntanetị
Dee 14, 2016 na 7: 02 AM
Ndewo, Daalụ maka ịkekọrịta ọmarịcha blọọgụ… .Best blog. isiokwu na-enye aka. Azụmaahịa ntanetị n'ịntanetị na India na-eto n'ike n'ike Enwere m mmasị na edemede gị n'ihi na ugbu a ụbọchị onye ọ bụla na-achọ teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọ dị mfe ịme.